Ukuncishiswa kwenhliziyo ngomzuzu njengoba kuqhathaniswa evamile, okuyinto ayisishiyagalolunye eziyikhulu namashumi amabhithi amabili, libhekene nomqondo bradycardia.
Ngokuvamile, bradycardia is phetho yokuphazamiseka ka inhliziyo conduction uhlelo. Ingozi zalesi simo wukuthi ukwehla ngokweqile e kwenhliziyo kuholela enganele kwegazi kwezitho nezicubu ngakhoke kuya hypoxia zokugcina, okuyinto kwakha ingozi engathi sína ukuba impilo nokuphila isiguli.
Nokho, ngaso sonke isikhathi bradycardia kubonisa khona isifo esithile. Abanye abantu abaqeqeshiwe, kaningi abasubathi, bradycardia - into yemvelo. Futhi kulokhu, ushintsho kwenhliziyo kusikisela okukhuthazela umzimba kanye nempilo enhle.
Kukhona izinhlobo eziningana ezahlukene kuye ngokuthi izinguquko isigqi. Uhlobo oluvame kakhulu i - bradycardia itheku. Kulesi uhlobo itheku isigqi azigcina uhlamvu yayo efanele.
Ngezinye izikhathi, itheku bradycardia kuhlangene arrythmia ngisho zokuphefumula arrhythmia isenzo. Nokho, lokhu ngempela ezingavamile. Ezimweni eziningi, itheku bradycardia is phetho khona isiguli dystonia autonomic nesimiso sezinzwa.
Ngakho, ngo-izifo ezihlukahlukene ingaqala bradycardia itheku. Izizathu eziholela lasungulwa, ngokuvamile kubangelwa inhliziyo. Okungukuthi, cishe zonke izifo zenhliziyo, ezifana nesifo senhliziyo, isifo senhliziyo, izifo eziningi, kanye ukuvuvukala - myocarditis futhi endocarditis.
Ngezinye izikhathi, itheku bradycardia kungase kubonise ukuthuthukiswa esivimba amanzi infarction ezingemuva udonga.
Ngaphezu kwalokho, ngaphansi kwethonya ejenti ethile eyenza imithi (B-blocker, glycosides inhliziyo, amiodarone, verapamil, diltiazem, njll) zingase zimiswe itheku bradycardia. Ukwelashwa nokuvikelwa ifomu engazweli ezihambisana Kulula ngokwanele ukuba ubuyise ukuqokwa izidakamizwa imbangela bradycardia.
Futhi, kungenzeka bradycardia kubangelwa zemvelo, izinguquko bokuphila kwezicubu inhliziyo, avame ushintsho olunjalo iminyaka yobudala uhlamvu.
bradycardia subjectively wabonakaliswa isiyezi, iphika, ukuhwalala samehlo, ubuthakathaka, ukukhathala, ubuhlungu esifubeni, palpitations, kwehle okuhlushwa, inkumbulo, kusebentisana ukunyakaza.
Bradycardia uphethwe yini kunzima, ngisho nasekhaya. Vele ubale kwenhliziyo yakho ngomzuzu.
Uma usola khona itheku bradycardia ukuqhuba manipulations ezengeziwe zokuxilonga. Omunye izifundo zokuxilonga eliphambili kakhulu ulwazi kakhulu ukuba ukuqhuba electrocardiography.
Ngezinye izikhathi kukhona uhlobo olukhethekile bradycardia, nemvelo lezivakashi, ie bradycardia akuyona njalo, futhi ngezinye izikhathi kuphela ibonakala. Kulokhu, indlela ejwayelekile - kokwenza i ECG, bradycardia ngeke ibonakale. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa indlela eyisipesheli inhliziyo ECG ukuqopha amahora ambalwa noma ngisho kwezinsuku - "Holter".
Uma okuvela bradycardia kwaba nemiphumela yokuphazamiseka uhlelo conduction kwenhliziyo, kungadinga elingenalo iwashi lenhliziyo.
Umgomo kwelashwa ukwandisa izinga inhliziyo ezingeni evamile lapho umzimba uthola imali eyanele igazi nomoya-mpilo.
Uma kungelashwa ukuwohloka mhlawumbe okuqhubekayo isiguli, ephelezelwa nokulahlekelwa ukwazi, syncope futhi kuze isimo kolaptoidnogo nokufa.
Ngakho, ekwelapheni bradycardia kwasekuqaleni kufanele iqondiswe ukuqedwa isici etiological.
Dystonia semithambo, ukuthi iyini - uphawu noma isifo?
SaseLyme borreliosis: omsakazo, izimpawu kanye nokwelashwa
Arachnoiditis Cerebral zobuchopho: izimpawu, ukwelashwa, imiphumela
Ukuvuvukala Kwamalunga: Izimpawu, Ukwelashwa
Banana ikhekhe multivarka: iresiphi
Ulenga izibani Industrial: izici, izinhlobo, izici
I olwenziwa asaba? Remedy imikhaza ukuze abantu. Indlela ukususa umkhaza
Inkolo namasiko - esivumelana ngakho
Artem Dolgin: Biography, izimpumelelo kwezemidlalo
Indlela ukupheka ekhaya iwayini ngamagilebhisi mhlophe